Izwe lama-Amish - I-Airbnb
Winesburg, Ohio, i-United States
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Marlene
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jan 31.
Indlu inefenisha yama-Amish eyenziwe ngezandla endaweni, i-DirecTV, ukufinyelela kwe-inthanethi ngesivinini esiphezulu kanye nesiphephetha-moya. Ikhofi elihambisanayo, amajusi neziphuzo ezithambile kuyatholakala kuzo zonke izivakashi ngesikhathi uhlezi nathi. Indlu futhi inompheme ogcwele ubude onama-hickory rockers alinde ukuhlala kwakho.
Siyakwamukela ku-Grapevine House Bed and Breakfast eyakhiwa ngo-1834. I-Grapevine House inezindlu ezimbili nesibaya esisodwa esizungezwe uthango olumhlophe lwepikithi. Itholakala eWinesburg, e-Ohio eseduze neBerlin Ohio kanye nemizuzu engama-30 ngaphandle kwaseCanton, e-Ohio. Le ndawo ilungele ukujabulela i-Amish Country e-Ohio. Ungahlela uhambo lwama-Amish ngokuvakashela ikhasi lethu lezinto okumele uzenze. Indlu enkulu kanye ne-Erma's House zinamagumbi ezivakashi ayisikhombisa abanzi anendlovukazi kanye/noma imibhede enosayizi ogcwele kanye namabhavu angasese. Zombili lezi zindlu zinamakamelo okuhlala anezindawo zokuhlala ezihlanganisa indawo yokungena yangasese, isiqandisi (mahhala ezihambelini zethu-ikhofi, amajusi neziphuzo ezibandayo ngesikhathi sokuhlala kwakho) izinto zokugezela, i-microwave, i-central air conditioning, i-DirecTv, ukungena kwe-inthanethi ngesivinini esikhulu kanye nokupaka ngaphandle komgwaqo. I-Grapevine House nayo inekhishi eliphelele elitholakalayo.
ubusuku obungu-7 e- Winesburg
Ngemva kosuku olude lokuthenga e-Winesburg noma ukuya e-Berlin nase-Walnut Creek (ibanga elingaba amamayela angu-7) sikhuthaza zonke izihambeli zethu ukuthi zizinike isikhashana ukuhlala, ziphumule futhi zijabulele izinto ezibukwayo nemisindo yase-Holmes County ngokusemandleni azo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Winesburg namaphethelo